အက်စတွန်ဗီလာမှာ ဂျာရတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဘယ်အရာတွေနဲ့ တိုင်းတာမလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ရော်ဘီဖောင်လာ - xyznews.co
အက်စတွန်ဗီလာမှာ ဂျာရတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဘယ်အရာတွေနဲ့ တိုင်းတာမလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ရော်ဘီဖောင်လာ
လီဗာပူး ဂန္တ၀င် ရော်ဘီဖောင်လာက စတီဗင်ဂျာရတ်ဟာ အက်စတွန်ဗီလာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အရာတွေကို ယူဆောင်ပေး နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထောက်ခံသွားခဲ့ပြီး ရိန်းဂျား မန်နေဂျာဟောင်း အနေနဲ့ ဗီလာပက်မှာ ဥရောပ၀င်ခွင့် ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်း ရှုံးထွက်ဖလား အောင်မြင်မှု တစ်ခုခုကို ရယူနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ အောင်မြင်မှုလို့ သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။
လီဗာပူး ဂန္တ၀င် ဂျာရတ်ဟာ ယခုတစ်ပတ် အစောပိုင်းမှာ ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ နည်းပြဒင်းစမစ် ရဲ့ နေရာကို အစားထိုး ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဂျာရတ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက စကော့တလန် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရိန်းဂျားကို တစ်ရာသီလုံး ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်း ၊ အကောင်းဆုံး ခံစစ် မှတ်တမ်းတွေနဲ့ အတူ အမှတ်ပေးဖလား ရယူပေးခဲ့ပြီး ဆဲတစ် အသင်းရဲ့ လွှမ်းမိုးနေမှုကို အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။
အသက် ၄၁ အရွယ် ဂျာရတ် အတွက် ဒါဟာ ပထမဦးဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် job ဖြစ်ပြီး ဗီလာဟာ လက်ရှိမှာ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် ၁၆ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး တန်းဆင်းဇုန်နဲ့ ၂ မှတ် အကွာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဖောင်လာက ဂျာရတ် အနေနဲ့ ဗီလာကို ပြန်လည် ဆွဲတင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပြီး ၎င်းဟာ လက်စတာမှာ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာ လုပ်ပြခဲ့သလိုမျိုး ဥရောပ၀င်ခွင့် နဲ့ အက်ဖ်အေဖလားကို ရယူပေးနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိနေတယ်လို့ ထောက်ခံသွား ပါတယ်။
လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုးဟောင်းက “ဂျာရတ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ နဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုအရည်အသွေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့ကို မှန်ကန်တဲ့ နည်းပြ အဖွဲ့၀င်တွေက ၀န်းရံပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ သူဟာ ရိန်းဂျားမှာ လက်တွဲခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အဖွဲ့၀င် အများအပြားကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး သူတို့ကို ဘယ်လောက် ယုံကြည်တယ် ဆိုတာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နည်းပြအဖွဲ့၀င် တော်တော်များများကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။ သူတို့မှာ အရည်အသွေးကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒါတွေဟာ အဓိကကျတဲ့ အရာတွေပါ။ ကြီးကြယ်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ ကြီးကြယ်တဲ့ မန်နေဂျာ ဖြစ်မသွားပါဘူး။ ကြီးကြယ်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကစားသမားတွေရဲ့ လေးစားမှုကို ရနိုင်ပြီး ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အချိန် အနည်းငယ် ပိုပေးမှုကို ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ အရာတစ်ခုခုကို ပေးစွမ်း သွားရမှာပါ။
သူ ဗီလာမှာ အောင်မြင်မှု ရနိုင်မလား? ကျွန်တော် ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး သံသယ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗီလာမှာ ဂျာရတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဘယ်လို တိုင်းတာ သွားမလဲ ဆိုပြီး မေးမြန်းနေတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒင်းစမစ်ဟာ အောင်မြင်မှု ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဗီလာဟာ top6အသင်းတွေကို ယှဉ်နိုင်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ မရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ နွေရာသီ အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားကို ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဗီလာမှာ ဂျာရတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုက ဘာလဲ? ဥရောပ ၀င်ခွင့် ဒါမှမဟုတ် ရှုံးထွက်ဖလား တစ်ခုခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ထူးဆန်းနေတယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ စတီဗီကို ဗီလာမှာ ဒရမ်မာဆန်ဆန် လုပ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ ရိန်းဂျားမှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြခဲ့ပြီးနောက် သူ ဒီနည်းပြ ရာထူးကို လက်ခံခဲ့တာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ ဗီလာနဲ့ အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်စွမ်း ရှိသလား? ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောသွားရမှာပါ။ သူ ချန်ပီယံလိဂ်၀င်ခွင့်ကော ရယူပေးနိုင်မှာလား? ဒါကလည်း သိပ်ပြီး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေက လက်စတာမှာ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာ လုပ်ပြခဲ့သလိုမျိုး ဥရောပ၀င်ခွင့်ကို စိန်ခေါ်နိုင်တာ နဲ့ ရှုံးထွက်ဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်တာကို ဂျာရတ် လုပ်ပြနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ အောင်မြင်မှုလို့ ယူဆရမှာပါ။” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဂျာရတ်ရဲ့ အက်စတွန်ဗီလာ နည်းပြဘ၀ ပထမဦးဆုံး ပွဲစဉ် ကတော့ လာမည့် စနေနေ့ ဘရိုက်တန်နဲ့ ကစားရမယ့် ပွဲစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article စပိန် ရဲ့ ခြေစစ်ပွဲအောင်မှုအတွက် နည်းပြ အန်နရီကေး ကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ဂျော်ဒီအယ်လ်ဘာ
Next Article ဒီရာသီ အာဆင်နယ် အသင်း ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရနိုင်/ မရနိုင် သုံးသပ် လိုက်တဲ့ ဂန်းနား ဂန္တဝင်